Archive du 28-févr-2022
Fanilikilihana sy antsojay Nampitandrina ny Fitondrana i Hajo.A
Miova ny tsio-drivotra politika ao anatin’ny Fitondrana. Nitondra fampitandremana miezinezina izay miantefa amin’ny Fitondrana ny antoko MMM (Malagasy Miara-Miainga) tarihin’Atoa Hajo Andrianainarivelo,
Niasa fotsiny sa nanao ny tena asany ?
Tsy misy manda fa miasa ny filoham-pirenena sy ny ekipany. Azo atao bango tokana mihitsy aza hoe “miasa ny fitondrana”.
Mpitondra fanjakana Tsapa ve fa tsy ilaina maika ny teleferika ?
Tany amin’iny tapany Atsinanan’ny Nosy iny ny Filoha Ankehitriny Andry Rajoelina ny faran’ny herinandro teo. Tany Tanambao Manampotsy, tany Anosibe An’ala,…
Loza - lalam-baovao Ivato 2 maty teo noho eo, 2 naratra mafy
Nandriaka indray ny ra teny amin'ny lalam-baovao Ivato, teo anoloan'ny toby miaramila RFI omaly tolakandro, tokony ho tamin’ny 4ora.
Efa tena miditra amin’ny propagandy i Rajoelina
Mandeha ny fitetezam-paritra ataon’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Mitety ireo faritra misy traboina, mizara zavatra,…
Miha tampina ny daomy Hataka sy trosa sisa iainana
Handalo fandinihana eo anivon’ny Filankevi-pitantan’ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny famoahana ny famatsiam-bolan’ny FEC (Facilité Elargie de Crédit) ho an’i Madagasikara.
Mponin’Andranolaleke sy Ambaliandro Mitohy ny gidragidra niainga tamin’ny resaka omby
Mitohy tsy mety nivalona ny fifanandrinan’ny mponina any Andranolaleke sy Ambaliandro, any Atsimo. Mpiandry osy iray antsoina hoe Maromahy avy ao Andranolaleke no niandry osy tao amin’ny tany isian’ny fifanolanana,
Conseil National des femmes de Madagascar Hanampy ireo vehivavy lasibatry ny rivo-doza
Hijery manokana ireo vehivavy lasibatry ny rivo-doza Batsirai tany amin'iny faritra atsimo atsinanan'ny Nosy iny ny fikambanana Conseil National des femmes de Madagascar (Cnfm) tarihin'ny filoha nasionaliny Rtoa Estelle.
Raharaha Kraomita Malagasy “Ao amin’ny minisiteran’ny harena an-kibon’ny tany no olana”
Nahitsin’ny Randrana sendikaly ny sabotsy teo fa ao amin’ny minisiteran’ny harena an-kibon’ny tany fa tsy angovo no olana mikasika ny raharaha kraomita Malagasy.
Antananarivo Manapotika fihariana ny delestazy
Miverina indray, raha ny hita ny faran’ny herinandro teo teny amin’iny boriboritany fahatelo sy ny manodidina eto Antananarivo renivohitra iny, ny fahatapahan’ny herinaratra maharitra.
Alliance française de Tananarive Mpianatra 7268 no niatrika fanadinana ny taona 2021
Hasiam-panitarana ny Alliance Française de Tananarive (AFT) etsy Andavamamba. Ny faran'ny herinandro teo no nametrahana ny vato fototry ny asa fanamboarana,
Befandriana Avaratra Hiakatra fampanoavana anio ireo mpivarotra omby mampiahiahy
Voasambotra tao an-tsena fivarotana omby antsoina hoe Sabotsibe Befandriana-Avaratra, i Monja sy Mihandry, izay samy mipetraka ao amin’ny Fokontany Manongarivo, kaominina ambonivohitra Befandriana avaratra, mpivarotra omby.
Tahiana Razanamahefa “Mbola maro ny velarantany azontsika hambolena vary”
Manaparitaka ny atao hoe ezaka fahavitan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny voly vary safiotra izahay aty amin’ny sehatra tsy miankina amin’izao fotoana izao,